Caalamka, 11 January 2017
Arbaco 11 January 2017
Diblomaasiyiin Imaaraati ah oo Lagu Dilay Afghanistan
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay in shan ka mid ah diblomaasiyiinteeda lagu dilay qarax bam oo Talaaddii ka dhacay magaalada Kandahar ee koonfurta dalka Afghanistan.
Fallanqeyn: Magacaabista Axmed Xuseen
Ahmed Hussen oo ah nin asalkiisu yahay Soomaali ayaa maanta loo magacaabay inuu noqdo wasiirka socdaalka, qaxootiga iyo jinsiyadaha ee dalka Canada.
Netanyahu oo Weerarkii Jerusalem ku Eedeeyey Daacish
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa weerarkii baaburka xamuul loo adeegsaday ee axaddii ka dhacay magaalada Jerusalem ku eedeeyey kooxda Daacish.
Dacwad Lagu soo Oogay Ninkii Weeraray garoonka Florida
Xeer ilaaliyaha magaalada Miami ayaa sheegay in dacwad la xiriirta fal qalalaaso ah lagu soo oogay nin looga shakisanyahay inuu ka danbeeyey toogasho Jimcihii ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee gobolka Florida.
Rag ka Qaxay Mareykanka oo Lug ku Galay Canada
Laba nin oo kasoo jeeda dalka Ghana ayaa kusoo kabanaya qeybta la dhigo dadka gubtay ee isbitalka Winnipeg ee dalka Canada, kadib markii ay ku lumen xuduudda, ayaga oo soo galaya Canada kana soo qaxay Mareykanka, sida uu baahiyey TV-ha CBC ee dalka Canada.
Russia oo Sheegtay in ay ka Baxeyso Syria
Dowladda Ruushka ayaa billowday inay yareyso ciidamada milatari ee ka jooga dalka Syria.
USA: Dhalinyaro Madow ah Dacwad Naceyb ah Lagu Soo Oogay
Afar qofood oo dhalinyaro kaso jeeda bulshada Madowga Mareykanka ee magaalada Chikago ayaa lagu soo oogay dacwad ah iney ku kaceen danbi naceyb ah.
Ninkii Fuliyey Weerarka Istanbul oo la Aqoonsaday
Wasiirka arrimaha dibedda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa maanta sheegay in mas’uuliyiinta ay aqoonsadeen ninkii fuliyey weerar lagu dilay 39 qof oo habeenkii sanadka cusub lagu qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada Istanbul.
Ciraq: 6,878 Qof oo Shacab ah oo la Dilay 2016
Qaramada Midoobay ayaa Isniintii sheegtay in argagixisada iyo ficillada kale ee rabshado ee dalka Ciraq ay sanaddii 2016 dileen 6,878 qof oo shacab ah, islamarkaana dhaawaceen 12,388 kale.
Turkiga: Ninkii Weeraray Istanbul oo Weli la Raadinayo
Mas’uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay inay u dhawyihiin in ay aqoonsadaan heybta nin 39 ruux ku dilay habeenkii sanadka cusub ee 2017 goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Istanbul.
Ciraaq oo ay Daacish Askar ku Laysey
Weerar ay fuliyeen xubno katirsan jabhada Daacish ayaa askar Ciraaqiyiin ah ku diley dalkaas Ciraaq.
Wareysi Gaar ah : Mo Farah oo la Hadlay VOA
Boqortooyada Britain ayaa ku maamuustey hab-maamuuska ugu sareeya ee ay boqortooyadu bixiso Oradyahanka caanka ah ee asalkiisu yahay Soomaliga, Mo Farah. Waraysi gaar ah ayuu siiyay VOA